Burmese Martyrs Day (19 July 2019)Martyrs' Day (Burmese: အာဇာနည်နေ့, pronounced [ʔàzànì nḛ]) isaBurmese national holiday observed on 19 July to commemorate Gen. Aung San and seven other leaders of the pre-independence interim government, and one bodyguard —Thakin Mya, Ba Cho, Abdul Razak, Ba Win, Mahn Ba Khaing, Sao San Tun, Ohn Maung and Ko Htwe...
Visits : 2199
လုပ်ငန်းရှင်များ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် Point of Sale Software ကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ရောင်းချပေး ပါမည်။Local (Server + Clients) ချိတ်ဆက်ပြီး သုံးသုံး၊ Computer တစ်လုံးတည်းနဲ့ပဲ သုံးသုံး အဆင်ပြေပါတယ်။POS Software (Basic Modules) ကို (၃ သိန်း) ဖြင့် စတင်ရောင်းချ ပေးပါမည်။ နှစ်စဉ်ကြေး ပေးရန် မလိုအပ်ပါ၊ အပြီး ဖြစ်ပါသည်။အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက☎️ 0977891507...
Visits : 1841
စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများ နှင့် တခြားသင်တန်းကျောင်းများ အားလုံးအတွက် Student Management System ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းကို လွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။လက်ရှိ ဆော့ဝဲလ်တွင် ပါဝင်တာတွေကတော့- Company Profile- Course များ သတ်မှတ်ခြင်း- Class များ ခွဲထားနိုင်ခြင်း- Class အလိုက် Time Table ခွဲခြင်း- Student Profile များ တည်ဆောက...
မိဘမဲ့ ကလေးလေးတွေ အယောက် ၈၀ လောက်ရှိနေပါပြီ။ မွေးကင်းစကနေပြီး ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေထိ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေကိုလည်း ကျောင်းထားပေးပါတယ်။လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်လေးတွေကို ဝိုင်းဝန်ကူညီပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါဦးနော်...ဆက်သွယ်လှူဒါန်း လိုသူများ---မျိုးဆက်သစ် မိဘမေတ္တာ ပရဟိတ မိဘမဲ့ကျောင်းရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်အနီး၊ထန်းတပင်မြို့နယ် ထိန်နှစ်ပင်ကျေး...
၁။ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိခြင်း။ယနေ့ခေတ်လူတွေက အရင်ခေတ်ကထက်အင်တာနက်ပိုအသုံးများလာပြီး တစ်ခုခု ကိုယ်သိချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အင်တာနက်ကနေတဆင့်ရှာဖွေလာကြတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက Website မရှိဘူးဆိုရင် အင်တာနက်ကရှာတဲ့ List ထဲမှာ သင့် Company ရှိမှာမဟုတ်သလို သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာ Information မှလည်း ရှာတွေ.မှာမဟုတ်ပါဘူး...
Visits : 2119
မိမိ၏ ဝင်ငွေအတွက် အခွန်ပေးဆောင်သည့် အခါ ဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရမလဲ ဆိုတာကို ဒီ Application လေးမှာ တွက်ကြည့်လို့ ရပါပြီ။လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ။ တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိလစာ၏ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရသလဲ ဆိုတာကိုပါ တွက်ပြပေးမှာပါ။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ နိုင်ငံခြားငွေကြေး ဈေးနှုန်းများကိုလည်း ကြည့်လို့ ရပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်က link လေးမှာ Down သွားလိုက်နေ...
13 - 18 of ( 43 ) records